Mahoridhe muWiricheya - Kisimusi yeVashandisi veWiricheya
Kana uri pawiricheya asi usingade kuti izvi zvikumise kubva pakufamba, pane nzira shoma dzaungabuda nadzo kuti unakirwe nezororo rako.
Nzvimbo zhinji dzezororo dzava mawiricheya kufambidzana, saka unogona kunakidzwa nerwendo rwako kusvika pakuzara kunyangwe iwe uri mumwe munhu ari mumitambo yakanyanyisa. Theme parks ari kuramba achiwedzera mawiricheya kufambidzana uye idzi inhau huru kune 8.3 miriyoni yevana vakaremara muUS
Dingindira Park Kuwanika kweWheelchair
Imwe yemapaki epaki akadaro Morgan's Wonderland muSan Antonio, Texas iyo yakagadzirirwa kuitira kuti vana vari mumawiricheya vabatwe zvakaenzana pamwe nevamwe vavo vanokwanisa.
Kune akawanda mawebhusaiti anonangana nekutsvaga mazororo kune avo vakasungwa newiricheya, iwe unongo ziva kwekutarisa. Izvo zvese zvinoenderana nezvauri kutsvaga kuita parwendo rwako, kubva pakuongorora guta hombe kuenda kune chikepe kana kutozorora pamhenderekedzo yegungwa.
Wheelchair Accessibility paGungwa
Mafambiro mazhinji ava mawiricheya zvizere kufambidzana kusanganisira makamuri kune akasiyana epabhodhi zviitiko. Inopfuura gumi nemaviri mitsara dzakasiyana siyana dzino sangana zvizere kufambidzana chinodikanwa uye chinhu chikuru ndechekuti vanoenda pasirese pasirese kwaunogona kuona izvo zvinopihwa nenzvimbo dzakasiyana.
Iwe unogona kusarudza kuve nekuzorora uye kuvandudza ruzivo munzvimbo iri padyo nemahombekombe. Dzimwe nzvimbo dzave nemukurumbira wekuve nehushamwari hwewiricheya uye kana usiri kunyanya kunetseka nezvekuenda chero yakanaka uye wiricheya. kufambidzana, iwe unofanirwa kupa idzi nzvimbo dzimwe pfungwa dzakakomba, kunyanya kana yakanaka mamiriro ekunze uye yakanaka mhepo iri pamusoro pezvenyu runyorwa.
hwiricheya kufambidzana Mahombekombe uye Resorts
Costa Blanca neCosta Del Sol kuSpain inzvimbo mbiri dzekutandarira dzine mawiricheya kufambidzana mahombekombe. Kune zvakare dzimwe nzvimbo zhinji muPortugal, Itari, Florida neTenerife!
Kana uri kuronga kukwira ndege kuenda kwauri kuenda, uchafanira kuronga pachine nguva kuti uone kuti nhandare yendege nendege zvinokwana wiricheya yako kana kuti zvinokupa rubatsiro rwewiricheya inoenderana nezvaunoda.
hwiricheya kufambidzana Airports
Nzvimbo zhinji dzenhandare dzine mawiricheya kana cheya yekubhodhira kune avo vanozvida. Izvo zvakagadzirwa kuti zvive zvakanaka uye zvinopa rutsigiro. Vanogonawo kubata zvidimbu zvako zvakasiyana zvemikwende. Nguva yako kunhandare yendege zvino ichave isina kusununguka uye unogona kuzorora wotanga rwendo rwako munzira kwayo.
Ziva kuti nzvimbo dzakawanda pasi rose dziri kuita mawiricheya kufambidzana, saka kana uine hurema ngazvirege kukutadzisa kubuda uchinakidzwa nenyika zvakazara.
Kwese kwaunofunga kuenda, iva nezororo rakachengeteka uye rinonakidza.
Kunze Kwezvinhu kutarisa mukati:
Mahoridhe muwiricheya, pekugara panowanikwa kune vashandisi vewiricheya